Parchisi Star ngwa Download - Free Board egwuregwu n'ihi na gam akporo
Parchisi Star ngwa Download File
Parchisi kpakpando bụ a web dabeere ọtụtụ version nke ọkọlọtọ isi osisi egwuregwu Parcheesi. Parcheesi board egwuregwu a na-a mma-mmasị na Spain dị ka Parchis, na kwuru na ọ bụ site na kpamkpam dị iche iche aha na mba dị iche iche. Ọ bụ a board egwuregwu nke Cross na gburugburu ezinụlọ. Ọ bụ ihe mmegharị nke Indian egwuregwu Pachisi ma ọ bụ Parcheesi ma ọ bụ Ludo ma ọ bụ Parchis On-akara
– Ọ bụ kpam kpam FREE igwu egwu
– 2 ma ọ bụ anọ soò Parcheesi board egwuregwu
– Nkata na ụgbọ mmiri Emoji mgbe ị na-egwu egwuregwu
– Mere maka ọgwụ & ekwentị
– Kwa ụbọchị Magic Igbe. Open iji merie dị ukwuu dị ka 50Okay Cash na a mgbe niile
– Ị kpọghee ekwt rụzuru mgbe ị na-egwu a ikenyeneke mbiet egwuregwu
Parcheesi a rụrụ na abụọ cube, 4 ihe kwa soÚ na a osisi na a na-edebe gafee mputa, 4 nook ebe na 4 obibi ụzọ n'ihi na a Central imecha ụlọ. Ndị kasị mma-mmasị Parcheesi mbadamba na America nwere 68 ebe gafee ọnụ ọnụ nke osisi, 12 nke na-agba ọchịchịrị na-echebe ebe. Ọ bụla nook nke osisi na-agụnye onye soò na akwụ, ma ọ bụ na-amalite ohere.
Ọ bụrụ na ị bụ free na-achọ ka na-eji elu àgwà oge mgbe Parcheesi bụ ebe a maka gị. All n'ime anyị mere ihe a na anyị na nwata. Ya mere ebe a anyị na-enye gị ka anya dị ka otu ugboro ọzọ gị na nwata. Na ebumnuche ibi na abụọ ọzọ
Ọ na-e ka anya dị ka rụrụ site Eze na ugbu a hụrụ n'anya ị. Parchis kemgbe mmasị na-akara egwuregwu nke ndị mmadụ n'otu n'otu na ụwa.
iTag – Music Tag Editor v1.44 – Download ngwa
Njedebe Njikwa Explorer v1.6.1.0 – Download ngwa
Kechioma Patcher ngwa v5.4.3 gam akporo (ọhụrụ) Ngwá Ọrụ Free Download
Twitter v2.1.2 – Download ngwa
Download FIFA 14 PSP iso + cso [English Patch] Gam akporo Gaming Rom PPSSPP / PSP
Google Books v1.5.2 – Download ngwa
VideoShow Pro – Video Editor 7.8.4rc ngwa…
Alarm Clock Plus v4.7.1 – Download ngwa
Samsung Browser gam akporo ngwa download maka free…
Lion King Soundboard v1.0 – Download ngwa
Racing Rivals Android Apk [mod Money] Free…